Talooyin iyo tabaha Sidee dib u soo ceshano Xogta laga iCloud File kaabta
Ma u baahan tahay in ay dib u soo ceshano warbixin ka iCloud gurmad file in aad qalab macruufka ah? Ka hor inta aadan heli download waa inay, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo jeedinaynaa inaad dooran hab sax ah loo sameeyo. Waxaa jira dhowr siyaabood oo dib u soo ceshano xogta ka iCloud. Ha hadalkayga qaado, waxaa ka? Fiiri macluumaadka soo socda:
Qaybta 1. Siyaabaha la isu soo ceshano Xogta laga iCloud File kaabta Qaybta 2. Waa maxay sababta Dadka Nacaybka iCloud? Qaybta 3. Ma filaysaa in Better iCloud Services?
Qaybta 1. Siyaabaha la isu soo ceshano Xogta laga iCloud File kaabta
Ayaa laga badiyay qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan qalabka macruufka oo doonaya in ay dib u soo ceshano xogta ka iCloud gurmad file? Ama uu kaa lumay qalab macruufka iyo rabto in aad hesho macluumaadka aad u muhiim ah shakhsi ka iCloud gurmad file, si aad iyaga ka dhigi kartaa in ay telefoonada kale ama kiniin ah in loo isticmaalo? Ok, waa in aad doorato jidkii toosnaa, inaan soo ceshano xogta ka iCloud gurmad file sida ay xaaladdaada.
Xaaladda # 1: Waa inaad la tirtiro xogta qaar ka mid ah oo ku saabsan qalab macruufka ah oo aad rabto inaad dib ka ah iCloud gurmad file ama xog ku saabsan qalabka macruufka kaliya la waayay iyaga oo aan wax u hesho sababo cad.
Xalka: Xaaladan oo kale, waa in aad soo celin xog ka iCloud gurmad file in aad qalab macruufka ah. Si tan loo sameeyo, Settings tuubada> General> celi> masixi All Content iyo Settings ku saabsan qalabka macruufka. Markaas tilmaamaha ku qoran iPhone, dooran Soo Celinta ka kaabta iCloud> saxiixa in aad Apple ID iCloud> dooran file gurmad ah si loo soo celiyo xogta ka.
Fiiro gaar ah: Marka aan sidaa yeelno, dhammaan xogta ku saabsan qalabka macruufka hadda laga tirtirayaa. Xogta Old ka iCloud gurmad file waxaa ka buuxsami doona qalab macruufka. Haddii aad qabtid qaar ka mid ah xog muhiim ah oo ku saabsan qalab macruufka ah, waa in aad u leexdo xagga habka soo bandhigay in xaaladda 2.
Xaaladda # 2: screen aan iPhone waxaa burburay. Anigu taas ma isticmaali kartaa mar dambe. Oo haddana waxaan diyaar u ah inay beddelaan si ay u qalab Android ahay. Sidee i soo ceshano xogta ka iCloud? Waxaan u baahanahay inaan dib ugu soo laabtay iCloud heli photos, xiriirada, qoraalada, fariimaha iyo qoraalka.
Xalka: Xaaladaha in aanad isticmaali kartaa qalabka macruufka, sheeg qalab macruufka ah waa la dumiyey ama la xado, marnaba ma awoodaan in ay isticmaasho habka Apple ayaa si loo soo celiyo xogta ka iCloud noqon lahaa. Just ha kuwaas oo xogta ku iCloud tageen. Jidka No. Isku day Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) si ay baarista iCloud gurmad file, soo saarida kuwaas oo xogta faa'iido kuu. Ka dib markaas, in aad your computer badbaadin karo xogta kuwan. Wixii sawiro, xiriirada, videos, heeso, iyo ka badan, waxaad yeelan doontaa in ay u geliyey telefoonka Android ama kiniin la Wondershare MobileGo for Android. Sida taariikhda chat WhatsApp, iMessages, fariimaha qoraalka ah, waxaad u dhoofin karaan sida qaab file elekterikal.
Tallaabada 1. Daahfurka Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo dooran "kabsado iCloud File kaabta".
Tallaabada 2. Log in la xisaabtaada iCloud iyo dooran file gurmad aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ah. Daaqadda pop-up ka, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad kala soo baxdo xogta aad u baahan tahay. Tani waxay kaa badbaadinaysaa inaad mar tan iyo markii aad ogtahay, oo dhan iCloud gurmad file waa mid aad u ballaaran.
Tallaabada 3. Ka dib markaas, waxaad ka arki kartaa barnaamijka aad ka baareyso gurmad iCloud iyo kala soocidda xogta galay qaybaha. Scan ka dib, waxaad riixi kartaa nooca xogta galeeysid bidix si ay ku eegaan files u dhiganta ama data. Hubi xogta doonayay oo guji Ladnaansho dib u soo ceshano warbixin ka iCloud.
Download version tijaabo u leedahay in isku day ah!
Talo & tricks: Haddii aad badiyay xiriiro oo doonaya in ay dib u soo ceshano xiriirada ka iCloud gurmad file, ka sokow celinta dhammaan xogta ka ah iCloud gurmad file, aad leedahay 3 fursado kale, sida hagaagsan oo dhan xiriirada ka iCloud in aad qalab macruufka markii buuga cinwaanka iCloud ah waxaa ka mid ah xiriirrada aad laga badiyay. hubi sida ay u soo ceshano xiriirada ka iCloud >>
Marka raadinaya sida inuu ka soo kabsado xogta ka iCloud, waa in aad mararka qaarkood qaataan noocyada kala duwan ee xogta tixgelin. Waxaan ula jeedaa siyaabo dib u soo ceshano nooc oo kala duwan oo xog ka duwan yihiin. Waxaad sidoo kale riixi kartaa bar navigation ka tagay si uu u hubiyo articles gaar ah sida loo sida inuu ka soo kabsado files ka iCloud
Qaybta 2. Waa maxay sababta Dadka Nacaybka iCloud
Marka iCloud la soo bandhigay Steve Jobs by, waxay ka dhigan tahay "kaliya shaqeeyo". Waxaa loo arkaa app a sixir in eradicates goobaha bedeley iyo nidaamyada file ay guushu ku qalabaynta, samaynta wax kasta oo dhici toos ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa iCloud shaqaysaa hab ku wareegsan oo kale oo kaliya. Dadka ka cawdaan badiyay xogta iyo cid saddexaad horumarinta heli waa adag tahay in ay dadka dhexgalaan la daadiyo ay.
1. ayaan anigu necbahay iCloud inta badan, sababtoo ah markii aan qortey iCloud, waxaa tirtirayaa oo dhan qoraalo cusub oo bedelay waxba ama qoraalo dhowr ah iCloud. Waxaan isku dayay in ay qoraalo gurmad in iCloud, laakiin waxa ay u muuqdaan ma ka wanaagsan inay ahaato. (Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad sii saxiixay iyo Notes jeedo gurmad function on)
2. iCloud sawirrada ah oo dhan ii soo diray inaan dadka cusub iMac ma heli karo
3. Waxaa dhacaya oo dhan wakhtigii dhammaan macluumaadka kaliya tageen, iCloud kaliya iyaga tirtirayaa, oo aan wax sababo la saadaalin karo. Ma jirto fursad si aad u hesho dib.
4. Waa maxay sababta aan Apple oo kaliya ka dhigi kara suurto gal ah in aan dhammaan photos aan in folder ku iCloud, sidaa darteed waxaan si fudud si ay u soo bixi kartaa in aan computer?
5. Haddii aad leedahay xaas, caruurta, iwm ku saabsan xisaabta isla Apple ka dibna waan kugu dhawri doonaa helitaanka kasta oo kale ee alaabtayda oo ku saabsan telefoonka.
6. farriimaha qoraalka My muuqaalkaas waxaa ku dhammaan qalabka aan dibadda. Nin ayaa oo aan iPod xiriiri iibsan maalinta Arbacada ah ka akhriyi kartaa fariimaha oo dhan iyo jawaabaan :( [Waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan SafeEraser Wondershare iyo dib u iPhone]
7. Tani waxa ay ahayd waayo-aragnimo ah oo niyad jab. Waxaa musuqmaasuqay taariikheed, in iCloud jeer oo dhammu waxay ahaayeen qalad ah oo aan lumiyay u hagaagsan oo dhan aaladaha kale ee aan. Rajo la'aan. Waxaa kharribeen profile saadaasha oo aan u hagaajinno profile ah.
8. ma waxaan kuu soo celin karaa xogta ka iCloud gurmad file tan iyo markii aan iibsaday iPhone cusub. Markii aan u isku dayay, fariimaha la soo dhisay dabamariyay, oo wuxuu ku yidhi "ma jirto meel ku filan".
9. Waxaan helay gurmad iCloud waa aan waxtar lahayn. Waxaad arki, labaad kasta isticmaalaa telefoonka, macluumaadka cusub ahbaa. Haddii aan ka heli qaar ka mid ah macluumaadka maqan oo isku day in aad soo celin aan iPhone la mid iCloud gurmad file, xogta ugu dambeeyey on my iPhone laga tirtirayaa. Waa maxay sababta ma ahan oo keliya sort oo dhan Apple xogta taageeray kartaa in iCloud galay qaybaha, jidaynayey isticmaala si loo soo celiyo xogta eegista?
Qaybta 3. Ma filaysaa in Better iCloud Services?
In kastoo ay jiraan boqolaal cabasho ku saabsan iCloud, waxaad weli ma joojin karo iyadoo la isticmaalayo, sax? Waxaa la filayaa in ay noqon adeeg heer sare ah si ay u hagaagsan iyo xog gurmad. Aan iska daayaan ka cabashada, laakiin u sheeg waxa aan filayaa in ay noqon. Soo socda waa codbixin ah haddii aad rabto hadda iCloud ama aan iyo waxa aad ka filan iCloud inay noqon. SAMAYNTA Codkaaga ha la maqlo !!!
2 Siyaabaha inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ka iCloud
Helitaanka fariimaha qoraalka ah oo muhiim ah oo ku saabsan iPhone ayaa maqan? Ha welwelin, haddii aad taageeray qalab macruufka ee iCloud, hubaal, aad ku socoto inuu ka soo kabsado dhan fariimaha qoraalka la tirtiray ama ka maqan iCloud gurmad file. Laakiin ka hor inta aanad samayn in, waxaa jira in yar trick ah waxaad isku dayi kartaa ku saabsan qalabka macruufka si ay u arkaan in kuwan qoraalka la tirtiray ayaa weli waxaa:
Tubada Messages si ay u abuurtaan. Marka uu furmo suuqa furmo, guji New fariin icon on xaq aad u sareysa. Daaqadda fariin New Si deegaanka, ku qor magaca xiriir ah in ay ka maqnaa. Haddii aad leedahay kayd ma cadda, laga yaabee in aad Marka aan sidaa yeelno, waxaad ka arki kartaa fariimaha qoraalka ah in la la'yahay ah. Si kastaba ha ahaatee, sidan weli ma laguu soo celin karo qoraallada, kaliya waxa aad ka arki kartaa. Ama haddii aad rabto inuu ka soo kabsado iyaga, waxaad isku daydaa inaad software Recovery iPhone SMS.
Si kastaba, haddii aad rabto inaad sii kuwan qoraalka tirtiray la waayay ama, waa in aad soo kabsado iMessages, SMS, fariimaha qoraalka ah ka iCloud. Hoos waxaa ku qoran 2 siyaabaha aad ku xirnaan kartaa:
Xalka 1: Soo Celinta Device macruufka la kaabta iCloud (sahlan laakiin masixi doono dhammaan macluumaadka hadda) Solution 2: Waraaqda fariimaha qoraalka ka soo An iCloud File kaabta (fudud, si fudud oo toos ah)
Xalka 1: Soo Celinta Device macruufka la kaabta iCloud (sahlan laakiin masixi doono dhammaan macluumaadka hadda)
Marka kabsaday Qoraallada ka iCloud waxaa ku xusan, waxa ugu horeeya ee u timid inaad maskaxdaada waa in la soo celinta fariimaha qoraalka ah ka iCloud gurmad file, sax? Ok, tani waa sababta dadka gurmad ay qalab macruufka ah in iCloud. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aanad hoos si ay hawsha, waxaan u leeyihiin in ay idin xusuusin in aan sidaa yeelno, dhammaan xogta hadda jira ee ku saabsan qalabka macruufka laga tirtirayaa. Xaaladdan oo kale, haddii ay jiraan qaar ka mid ah xog muhiim ah, fadlan gurmad ah ama si toos ah isku dayo xal 2 kaasi oo aan lahayn wax saameyn ah in xogta aad hadda.
Tallaabada 1. Settings tuubada> General> celi> masixi All Content iyo Settings. (Haddii aad u dhigay habayn ah, ka dibna daaqad arbushin doonaa, waydiinaya inaad galaan habayn saxda ah.)
Tallaabada 2. Ka dib markii tirtiro xogta macruufka oo dhan, suuqa kala arbushin ilaa doona, inaad u bixisaa fursad u Soo Celinta ka kaabta iCloud . Waxaa Dooro iyo saxiixa in iCloud la ID Apple aad. Dooro gurmad ah oo xiriir fariimaha qoraalka doonayo waxaana dib loo qalab macruufka la.
Xalka 2: Waraaqda fariimaha qoraalka ka soo An iCloud File kaabta (fudud, si fudud oo toos ah)
Halkii ay ka oggolaadaan in aad kaliya inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ah ka iCloud gurmad file, Apple aad u baahan tahay in la soo celiyo qalabka macruufka la dhan iCloud gurmad file, taas oo keeni in xogta mar kale laga badiyay. Nasiib wanaag, hadda waxaad fursad u haysataa cusub - Wondershare Dr.Fone ee macruufka, oo bogsan doonaan fariimaha qoraalka ah ka iCloud gurmad file aan tirtiro qalab macruufka.
Waraaqda Qoraaladda iyo wada hadalladu ka iCloud gurmad file;
Farriimaha qoraalka Dhoofinta ka iCloud gurmad file sida HTML elekterikal, XML ama file TXT
Save oo dhan ku lifaaqan fariimaha qoraalka ah;
Guide 3-Step Sidee inuu ka soo kabsado Messages iMessage / Text ka kaabta iCloud
Waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) oo ku xidh. Just download version saxda ah ee nidaamka qalliinka on your computer. Ka dib markaas, waxaa isla markiiba abuurtaan.
Tallaabada 2 Download iCloud gurmad qalabka macruufka
Riix soo kabsado iCloud kaabta File , tab ku yaal dhinaca midig. Log in la ID aad Apple ama account iCloud. Halkan Wondershare Dr.Fone ee macruufka marnaba ururiya ka mid ah macluumaadka aad xisaabta, laakiin muujiyaan iCloud gurmad file si toos ah aad u. Next, dooran gurmad iCloud ah taas oo ka kooban fariimaha qoraalka ah iyo riix Download dhanka midig. In ka-up pop, ay doortaan in ay soo bixi Messages iyo Lifaaq Message .
Tallaabada 3 Ladnaansho fariimaha ka iCloud
Riix Scan si ha barnaamijka baarista iCloud gurmad file. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, Wondershare Dr.Fone fariimaha qoraalka ah aad gelin doonaa qaybta Messages galeeysid bidix. All ku lifaaqan farriin la gelin doonaa Lifaaq Message . Waxaad riix kartaa galeeysid ka tagay inay ku eegaan dhamaan fariimaha iyo lifaaqyada fariin. Oo guji Ladnaansho dib u soo ceshano fariimaha kaga imaanayo iCloud.
Sidee inuu ka soo kabsado Songs ka iCloud
Ha ogaadaan sida ay u soo kaban songs ka iCloud? In kastoo xiriir ka duwan, jadwalka taariikhda, sawirada iyo videos in Roll Camera waxaa lagu xoojiyaa in gurmad iCloud, songs weli la soo kabsaday karaa iCloud sidoo kale, laakiin si ka duwan. Dhammaan heeso aad iibsaday Lugood Store ama App Store ayaa la badbaadiyey on iCloud aad. Ka dib marka aad tirtirto music si qalad ah, waxaad soo kaban karto, music ka iCloud iyaga oo mar kale soo degsado. Waa kuwan tallaabooyinku:
Tallaabada 1. Isku qalab macruufka la Wi-Fi, in la hubiyo network waa mid deggan,
Tallaabada 2. tuubada app Lugood Store aad macruufka qalab
Tallaabada 3. Log in la ID Apple oo saxaafadda "aad More "hoose oo ka mid ah furmo suuqa.
Tallaabada 4. Guji ka iibsaday tab iyo dooro Music . Markaas liiska heesaha oo dhan ku iibsaday ID Apple aad ka muuqan doontaa. Riix badhanka download soo socda si song kasta in ay dib u download it.
Tani waa sida inuu ka soo kabsado heeso ka iCloud. Waa arrin ka duwan soo kabsado xiriirada, sawiro, jadwalka taariikhda, qoraalo, iyo fariimaha ka iCloud. Markaasaa waxaa taas wada shuqulladiisa oo kaliya Lugood iibsaday heeso. Haddii qaar ka mid ah heesaha lumay aan la iibsaday ka Lugood Store, waxaad isku daydaa inaad Wondershare Dr.Fone ee macruufka inuu ka soo kabsado heeso ka maqan qalab macruufka si toos ah.
Sidee inuu ka soo kabsado la diiwaangeliyey ama iibsatay Videos ka iCloud
Aad dareentay laga yaabaa in videos iibsaday ka Lugood Store oo diiwaan iskaa badbaadiyey ee meelo kala duwan. Cajallado badbaadiyey ee ku giringiriya Camera, halkaas oo gacan seyray, sawirada yihiin. Videos in Camera Roll lagu taageeray kartaa in gurmad iCloud. Si kastaba ha ahaatee, soo iibsatay videos aan la taageeray karaan in ay gurmad iCloud, laakiin in lagu kaydiyo iibsaday. Nasiib wanaag, labada cajallado iyo iibsatay waxay yihiin ka iCloud. Hubi faahfaahinta hoose:
Qaybta 1. kabsado la diiwaangeliyey Videos ka iCloud Qaybta 2. Ladnaansho iibsaday Videos ka iCloud
Qaybta 1. Ladnaansho diiwaan Videos ka iCloud
Asal ahaan, waxaa jira 2 siyaabo inuu ka soo kabsado cajallado fiidyow ka iCloud gurmad file: celin qalab macruufka la gurmad iCloud iyo Macdan kaliya videos kaga imaanayo iCloud. Riix tab ah si aad u hubiso faahfaahinta
Xulo Ladnaansho videos ka iCloud
Kabsado Videos ka iCloud by qalabka celinta
Sidaas uma baahna ma waxaad leedahay macruufka qalab dhow dahay, laakiin account iCloud. Barnaamijku wuxuu waxaana dooneynaa in aad isticmaasho - Wondershare Dr.Fone ee macruufka Siibnaa videos kaga imaanayo iCloud ceshan videos kaga imaanayo iCloud si aad u computer. Later, waxaad yeelan doontaa in ay iyaga u hagaagsan in aad qalab macruufka ah iyada oo Lugood.
Tallaabada 1. Download Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa software inuu ka soo kabsado videos kaga imaanayo iCloud. Labada qeybood oo Windows iyo Mac waxaa laga heli karaa. Waa in aad kala soo bixi version saxda ah ee computer. Ku rakib oo abuurtaan.
Tallaabada 2. Download file gurmad iCloud
Guji " kabsado iCloud kaabta File "dusheeda ee suuqa ugu weyn. Gal iCloud la ID Apple aad. Next, barnaamijkan soo kabashada video ogaadaa doonaa iCloud files gurmad iyo soo bandhigaan furmo hal-by-ka mid ah. Click Download ag gurmad ah taas oo ka kooban videos aad rabto in aad soo kabsado. Daaqadda pop-up ka, hubi Camera Roll (meesha videos diiwaan yihiin).
Tallaabada 3. Ladnaansho videos ka iCloud
Waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo si ay u soo bixi gurmad iCloud faylka. Ha welwelina, samir. Ka dib markaas, guji Scan si ha barnaamijka si scan gurmad iCloud faylka oo ku kala soocaan files aad u. Later, galeeysid bidix, waxaad riixi kartaa Roll Camera ama App Videos ay u fiiriyaan soo kabsaday videos.
Soo celinta qalabka macruufka la gurmad iCloud hubaal heli doonaa videos, kuwaas oo aad taageeray in iCloud dib. Laakiin oo dhan xog jirta ee hadda la weligiis tirtirayaa. Sidaas hor qabanayaan aad u soo celiyo, waa in aad xogta hadda gurmad si iCloud.
Tallaabada 1. Isku qalab macruufka la Wi-Fi, hubiyo shabakad deggan.
Tallaabada 2. Settings tuubada> Genera> celi> masixi All Content iyo Settings ku saabsan qalabka macruufka.
Tallaabada 3. Daaqadda pop-up ah, tuubada Soo Celinta ka kaabta iCloud> Gal iCloud la ID Apple aad> dooran gurmad iCloud ah si loo soo celiyo.
Qaybta 2. Ladnaansho iibsaday Videos ka iCloud
Haddii aad lumay videos kuwan soo iibsatay ka Lugood Store ama App Store, waxaad iyaga bogsan karaan kaydinta iCloud aad. Waa kuwan tallaabooyinku:
Tallaabada 2. Tubada Lugood Store app aad iPhone, iPad, iPod ama taabashada iyo tubbada More hoose ee suuqa kala.
Tallaabada 3. Log in la ID Apple aad. Guji ka iibsaday tab iyo doorasho Movies ama ay muujinayso TV . Riix daruur yar video kasta oo ayan ku jirin in ay redownload in qalab aad. Taasi waa.
Sidee inuu ka soo kabsado Calendar ka iCloud
"Waxaan la tirtiro aan jadwalka on my iPhone. Waxaa ku jira oo dhan ballamaha, shirarka iyo jadwalka kale. Waxaan ku taageeray aan iPhone in iCloud. Ma waxaa jira fursad ah inuu ka soo kabsado qaab aan jadwalka iCloud? Fadlan caawiyo. "
Calendar waa mid aad muhiim u ah dadka, gaar ahaan dadka ku mashquulsan. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar marka aad ka dhigan tahay in ay tirtirto dhacdo, waxaad laga yaabaa in ay tirtirto kalandarka dhan. Xaaladdan oo kale, haddii aad aad macruufka qalab, sidoo kale taageeray in Lugood ama iCloud, aad qaban karto soo kabashada Calendar. In socda, waxaan la wadaagi doonaa 2 siyaabo sahlan aad la ah sida inuu ka soo kabsado Calendar ka iCloud:
Xalka 1. Xulo Ladnaansho Calendar ka iCloud Xalka 2. Soo Celinta Device macruufka inuu ka soo kabsado Calendar
Xalka 1. Xulo Ladnaansho Calendar ka iCloud
Haddii aadan rabin in la soo celiyo qalabka macruufka la duug ah iCloud gurmad file, waxaad ku xirnaan karaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka (software desktop) si ay u qabtaan soo kabashada Calendar ka iCloud. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud.
Download Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac). Waxaa rakib on your computer oo abuurtaan. In uu furmo suuqa ugu weyn, guji tab ee la soo dhaafay "kabsado iCloud File kaabta".
Tallaabada 2 Download iCloud gurmad
Saxiix ee iCloud account la ID Apple aad carmal ugu weyn. Markaas barnaamijkan lagu ogaan doono iyo muujiyaan oo dhan iCloud files gurmad hal-by-ka mid ah. Dooro mid ka mid ah ay ku jiraan aad Calendar in aad rabto in aad soo kabsado iyo download it. Daaqadda pop-up ka, waxa kaliya ee aad dooran kartaa Calendar & waano inaad kala soo baxdo.
Tallaabada 3 ceshano Calendar ka iCloud
Riix Scan si ha kalandarka laga soosaaray barnaamijka ka gurmad iCloud ah oo aad soo bixi. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha waxaa lagu kala soocaa galay category. Waxaad riix kartaa Calendar galeeysid bidix si ay ku eegaan Calendar aad helay. Markaas, guji Ladnaansho inay u dhoofiyaan file ah in aad damisid.
Xalka 2. Soo Celinta Device macruufka inuu ka soo kabsado Calendar
Si kale inuu ka soo kabsado kaalendarka ka soo iCloud waa in la soo celiyo qalabka macruufka la gurmad iCloud ah taas oo ka kooban taariikheed ee aad u baahan tahay. In kastoo Ma jecli talinaynaa sidan, dad badan ayaa weli waxay door bidaan. Ka dib oo dhan, waa hab-ka rasmiga ah inuu ka soo kabsado taariikheed, xiriirada, goobaha, files ee ku giringiriya Camera, iwm ka iCloud.
Tallaabada 1. Isku qalab macruufka iyo shabag, shabakad deggan.
Tallaabada 2. iPhone, iPad ama iPod, Settings tuubada> General> celi> masixi All Content iyo Settings. Waxa aad qaadan doontaa dhowr ilbidhiqsi si ay u masixi dhammaan xogta ku saabsan qalabka macruufka.
n Tallaabada 3. Ka dib tirtiro dhammaan xogta ku saabsan qalabka macruufka, daaqad cusub soo booda, kuu oggolaadaan in aad soo celin qalab aad. Dooro Soo Celinta ka kaabta iCloud. Gal iCloud la ID Apple aad. Laga soo bilaabo files gurmad iCloud liiska, dooran gurmad aad u baahan tahay iyo soo celiyo qalabka macruufka la.
Kabsado Notes ka iCloud - 2 Siyaabaha tahay inaad
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad ka iPhone, iPod, iyo iPad tirtirto qoraalada isag, sida xaaladda aan ku soo sheegnay sida ay u tirtirto qoraalo ka iPhone. Xaaladdan oo kale, waa in aad gurmad qoraalo aad u iCloud si joogto ah, qoraalo laga fogaado laga badiyay. Mar kasta oo aad ka heli qoraalo aad la la'yahay, waxaad soo kaban kartaa xusuusqor ka gurmad iCloud. Hoos waxaa ku qoran 2 jidadkooda sida inuu ka soo kabsado qoraalo ka iCloud.
Xalka 1. ceshano qoraalo ka iCloud by celinta qalabka macruufka la iCloud gurmad Xalka 2. Ladnaansho qoraalo ka iCloud ay soo saarida qoraalo ka iCloud gurmad Talooyin iyo tabaha loogu Sida loo ilaaliyo Notes Safe
Xalka 1. ceshano qoraalo ka iCloud by celinta qalabka macruufka la gurmad iCloud
Haddii aad xoojiyaa aad iPhone, iPad, iPod ama in iCloud la qoraalkaaga in dhawaan, ka dibna aad u soo ceshano kartaa xusuusqor ka iCloud by celinta qalabka macruufka la gurmad iCloud. Waxaad ogaataa in iCloud xajisto 3 hayaan ugu danbeeyay, in la hubiyo gurmad ah taas oo ka kooban qoraalo aad waa in ugu dhawaan saddex hayaan.
Tallaabada 1. Isku qalab macruufka la shabakad deggan.
Tallaabada 2. qalab aad Settings tuubada,> General> celi> masixi All Content iyo Settings.
Tallaabada 3. Ka dib tirtiro dhammaan xogta ku saabsan arrimo qalab, marka uu suuqa kala cusub soo booda , doortaan Soo Celinta ka kaabta iCloud. Gal iCloud la ID Apple aad. In gurmad iCloud liiska, dooran gurmad aad u baahan tahay iyo soo celiyo qalabka macruufka la.
Xalka 2. Ladnaansho qoraalo ka iCloud ay soo saarida qoraalo ka gurmad iCloud
Soo celinta qoraalo ka iCloud waa hab si aad ah loo codsatay inuu ka soo kabsado qoraalo ka iCloud. Si kastaba ha ahaatee, aad dareentay laga yaabaa in marka aad samayn ku soo celiyo, dhammaan xogta ku saabsan iPhone, iPad ama iPod laga tirtirayaa. Waxba ma ahan haddii aadan haysan xog muhiim ah oo ku saabsan qalab macruufka ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan rabin inuu ka soo kabsado qoraalo ka gurmad iCloud Oo aad dhawrtid xog muhiim ah hadda sidoo kale, ka dibna aad qabto in ay la kulmaan dhibaato. Nasiib wanaag, haatan waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (qalab desktop a) lagu soo saaro qoraalo ka gurmad iCloud, badbaadinta qoraalo muhiim ah in aad computer. Hoos waxaa ku qoran 3 talaabooyin fudud.
Riix soo kabsado iCloud kaabta File , tab ku yaal dhinaca midig. Log in la ID aad Apple ama account iCloud. Halkan Wondershare Dr.Fone ee macruufka marnaba ururiya ka mid ah macluumaadka aad xisaabta, laakiin muujiyaan iCloud gurmad file si toos ah aad u. Next, dooran gurmad iCloud ah taas oo ka kooban qoraalo aad iyo riix Download dhanka midig. In ka-up pop, ay doortaan in ay soo bixi Notes .
Tallaabada 3 Ladnaansho qoraalo ka iCloud
Riix Scan si ha barnaamijka baarista iCloud gurmad file. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, Wondershare Dr.Fone qoraalkaaga gelin doonaa qaybta Fiiro galeeysid bidix. Waxaad riix kartaa galeeysid ka tagay inay ku eegaan qoraalada oo dhan. Oo guji Ladnaansho dib u soo ceshano qoraalo ka gurmad iCloud. In ka-up pop, waxaad dooran kartaa inuu ka soo kabsado qoraalada si aad u computer inay xaq u leedahay in aad qalab macruufka ah.
Talooyin iyo tabaha loogu Sida loo ilaaliyo Notes Safe
Sidee si looga fogaado iCloud masixi qoraalkaaga qalabka macruufka: Your iCloud tirtiro qoraalada aad ku iPhone, iPad ama iPod, inta badan, maxaa yeelay, adigu ma aadan xajin saxiixay iCloud. Haddii aad iCloud saxiixay, ka dibna mar kasta oo aad u cusboonaysiiso qoraalada aad ku saabsan qalabka macruufka, ay la cusbooneysiin doonaa in iCloud aad.
Qoraalada kaabta: iCloud ka sokow, xisaab email qaar ka mid ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u hagaagsan waxyaabaha ka app Notes ku saabsan qalabka macruufka xisaabaha email. Later waxaad ka arki kartaa, kuwaas oo alaabta ee Notes app ee OS X on Mac ama in ka Notes gal in aad email-macmiilka. Xaaladdan oo kale, ma aha fikrad xun in ay dib u kor qoraalada xisaabaha email, sax?
> Resource > iCloud > Sida loo soo ceshano Xogta laga iCloud File kaabta